तयारी 3D v4 को लागि प्रोप एयरलाइन्स?
प्रश्न तयारी 3D v4 को लागि प्रोप एयरलाइन्स?
2 महिना3सप्ताह पहिले #1334 by अमीरब
हाय, धेरै महिनाको लागि P3D v4 रहेको छ र डग्लस प्रवर्धकहरू खोज्दै छन् जुन V4 मा काम गर्नेछ। म c47 / DC3 छ। DC4 / 6or 7s सँग काम गर्न सक्षम भएका कुनै भाग्य छैन। केहि DC-6B हरू चाहानुपर्छ जुन V4 मा काम गर्नेछ!
समय पृष्ठ सिर्जना गर्न: 0.149 सेकेन्ड